I-Linux Mint vs Ubuntu. Ndikhetha eyiphi? | Ubunlog
UPablo Aparicio | | Ezinye iidesika, ubunye
Zininzi iinkqubo ezisekwe kwinkqubo yokusebenza kweLinux kwaye Ubuntu buyafumaneka ukuya kwi-10 yeencasa ezisemthethweni ukuba sibala ingxelo yoqobo. Iinkqubo ezisekwe Ubuntu zinokufaka isoftware efanayo, zisebenzisa imiyalelo efanayo kwi-terminal kunye neZiko leSoftware. Luluphi utshintsho oluyisoftware abayifakileyo ngokwendalo kunye nemeko yokuzoba. Ngale nto engqondweni, namhlanje siza kubeka ubuso ngobuso neLinux Mint vs Ubuntu, Enye yeenguqulelo ezaziwa kakhulu ze-Ubuntu, ngakumbi kwiikhompyuter ezinezixhobo ezilinganiselweyo.
Njengokuba zombini ezi nkqubo zinendawo efanayo ngaphakathi, kuya kufuneka sizisekele kwezinye iindawo ezinje ngoyilo, iinkqubo ezifakiweyo okanye iimeko ezichazwe ngasentla. Kukho into enokubaluleka, kuxhomekeka kwikhompyuter esifuna ukuyisebenzisa, kwaye yiyo ubumdaka benkqubo, ukungathembeki, icandelo apho bobabini baziphatha ngendlela ebalaseleyo.
1 Khuphela kunye nokufakwa
3 Umfanekiso kunye noyilo
4 Umbutho kunye nokusetyenziswa ngokulula
5 Iinkqubo ezifakiweyo
6 Isiphelo: I-Linux Mint vs Ubuntu
Khuphela kunye nokufakwa
Ngokuqinisekileyo oku eyona ngongoma ibaluleke kakhulu ukuyixabisa kolu thelekiso lweLinux Mint vs Ubuntu.
Mna ndisebenzise Ubuntu ishumi leminyaka, ndiqaphele ukuba imeko yemizobo Ubunye benza ikhompyuter yam icothe kakhulu ilaptop. Andinakuthi ibimbi okanye ukuba le nkqubo ibingathembekanga, kodwa ilahle isantya esikhulu, ngakumbi xa kuvulwa ezinye izicelo ezinje ngeZiko leSoftware. Kwakhona ukubona iigrey windows xa inkqubo isenziwa kundenze ndacinga ukuba le nkqubo ibingasebenzi kwikhompyuter yam enezixhobo eziphantsi.
Kwelinye icala, zombini iCinnamon kunye neMATE zi ukukhanya kwemizobo, ingakumbi eyesibini. Isantya kunye nesantya, iLinux Mint ibetha Ubuntu kweli candelo.
UmninimziI-Linux Mint (MATE).
Ngokumalunga noyilo, ndicinga ukuba yonke into ixhomekeke kakhulu. Ubuntu busebenzisa ubunye, indawo endiyithandayo nangakumbi, kodwa kufuneka iqatshelwe ukuba kunzima kum ukufumana usetyenziso, nangona kubalulekile ukukhankanya ukuba ungakhangela nantoni na (ngaphakathi kwezicelo ezibandakanyiweyo, ezinje ngokuthanda) ucofa iqhosha leWindows kwaye uqalise ngokuchwetheza. Ngaphandle koko, ii icon kunye nokusetyenziswa windows zijongeka zifana kuzo zombini (okanye ezintathu, njengoko siza kuchaza) iinkqubo zokusebenza, kodwa ndicinga ukuba ubunye bunomtsalane.
I-Linux Mint iza kwiinguqulelo ezimbini ezahlukeneyo. Inguqulelo enendawo yemizobo UMATE ijongeka kakhulu njengo-Ubuntu de kwafika ubume bemeko yomfanekiso ngo-2011. UMATE unemifanekiso engakhathaliyo endikhumbuza, ngandlela thile, ngeWindows 95, kodwa enomtsalane ngokombono wam kunale ilandelayo.
Ikwafumaneka kuhlobo olunomfanekiso obonakalayo Cinnamon. Indawo yemizobo inomfanekiso onomtsalane kuno-MATE kodwa nanini na ndiwusebenzisile awukhange undiqinisekise. Ukuba kufuneka ndikhethe, ndiza kubambelela kuhlobo lwe-MATE. Kwaye hayi, imifanekiso emibini edlulileyo ayifani.
Umbutho kunye nokusetyenziswa ngokulula
Ukusebenziseka lula ndicinga ukuba ikwayinto ethile nangona siza kuyithathela ingqalelo ngokuthelekisa iLinux Mint vs Ubuntu.
Kubasebenzisi aba isetyenziswe kwiWindows, unokufumana kulula ukusebenzisa iLinux Mint Kuzo naziphi na iinguqulelo zayo, iCinnamon ibonisa imenyu yokuQala ngokufana ngakumbi nendlela iWindows XP, Vista kunye ne-7 ebonisa ngayo ngokungagqibekanga kwaye iMate ifana nqwa nesiQalo sokuqala.
Iinguqulelo ezimbini zeLinux Mint zinebhari emazantsi kwaye Ubuntu inayo kwicala lasekhohlo kwaye nantsi intliziyo yam yahlulelene phakathi kwezona zininzi (Ubunye) okanye ezona zakudala, kodwa ndicinga ukuba ndiyayiqhela kwaye Ndihlala noBuntu.
Zombini iinkqubo ezisebenzayo zinayo yonke into eyimfuneko ukusebenza ukusukela mhla siqala inkqubo okokuqala. Ubuntu ayinazo ezinye iinkqubo ezifakwe ngokungagqibekanga, ezinye iinkqubo endisoloko ndiphela ndizifaka kwaye ezenza ukuba ndicinge njalo Ukukhethwa kweLinux Mint kungcono. Umzekelo ngumdlali weendaba weVLC okhoyo kwiLinux Mint hayi Ubuntu (nangona inokufakwa ngokukhawuleza ngomyalelo ofanelekileyo).
Ngaphandle koku, iLinux Mint ikwanazo nezinye izicelo ezincinci njengeMintAssistant, iMint Backup, iMintDesktop, iMintInstall, iMintNanny okanye iMintUpdate enokuba luncedo ngaxa lithile, kodwa endingazange ndiyisebenzise.
Ngapha koko, oku kukwangumbandela ophantsi kuba imalunga nezicelo eziluncedo kum; Abanye abasebenzisi kunokubaluleka ukuba le nkqubo ingafiki inezicelo ezininzi, into eyaziwa njenge bloatware.
Isiphelo: I-Linux Mint vs Ubuntu
Ukuba sithatha isithuba sayo yonke iposti ye- I-Linux Mint vs Ubuntu, Siyabona ukuba ukhetho alukho lula njengoko kubonakala ngaphandle kwento yokuba nganye ibonakala kwicandelo elithile.
Amanqaku, sinentambo. Ukuba kufuneka ndinike ibhanti eliphumeleleyo kwelinye, ndingumongameli 😉 ndingalinika Ubuntu. Kuyinyani ukuba uyasibona isantya xa uvula usetyenziso, kodwa ndiziva ndikhululekile ngalo kuzo zonke iinkalo. Ukuba ubazamile, ukhetha eyiphi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » Ezinye iidesika » I-Linux Mint vs Ubuntu
Диего Хабиер sitsho
Phendula kwi Диего Хабиер
Joaquin Valle Torres umfanekiso wokubamba sitsho
Hlala nalowo usebenzela elo qela, sele yenzekile kum ukuba enye kunye nenye ayisebenzi ngokuxhomekeke kwiqela, ke ukuba usebenzisa enye okanye enye, kwaye yonke into ihamba kakuhle kuwe, kwaye Sebenzisa ipc, ngokuchanekileyo, kakuhle kuloo nto.
Phendula Joaquin Valle Torres
UDavid Alvarez sitsho
Phendula kuDavid Alvarez
Xa uqhele ukuqhekeza kunzima kakhulu ukutshintsha izikhokelo ze-distro ubuntu. Ngoku kufuneka sikhumbule ukuba kuncinci kangakanani ukwenza iinguqulelo zamva nje. I-Linux i-mint ndiyayikhetha kwinguqu yayo ye-debian kuba iqinisekisa yonke i-mint kunye nokuzinza kwe-debian enkulu
UDuilio E. Gomez sitsho
Ubuntu bulungile kwizixhobo zam,
Phendula kuDuilio E. Gomez
U-Lucas Serrey sitsho
Ubuntu sele kwiminyaka embalwa edlulileyo. Ngaphandle komkhwa kunye nesiphumo esihle. Mint tmb ilungile. Iya kukuthanda.
Phendula uLucas Serrey
UMiguel Gutierrez sitsho
Kulungile Ubuntu. Kuba iMint ayicacanga kwi-pc yam, indala kakhulu
Phendula uMiguel Gutierrez
Ewe, amanqaku akho alungile, amagqabantshintshi nawo, asekwe kuyo yonke loo nto, ngokokubona kokusebenziseka kunye nesantya, ndingaya kwi-Mint nge-MATE, kodwa ndiyakholelwa kakhulu ukuba isoftware ukongeza ekubeni luncedo kwaye iyifezekise imisebenzi kufuneka idluliselwe ngokuchanekileyo kumsebenzisi, njani? ukwenza ujongano oluchanekileyo, olunomdla, olusebenziseka lula, olusengqiqweni, ngengqondo, umzekelo, imenyu yeUbumbano yimpumelelo iyonke, abanye baya kuthi ikopi iyonke ye-OSX, kodwa, ngaba yeyenye ukuba ayisiyiyo indlela yokufumana imenyu esikelelweyo, kunjalo eGnome bagqibe kwelokuba bayibeke kwiqhosha lohlobo lwebhamburger okanye ngegiya yegiya, kodwa kwidesktop asiyidingi loo nto, ukongeza kubungakanani bokuchukumiseka umnwe, uninzi lwethu sisebenzisa i-PC okanye ilaptop yePC okanye yeLaptop, sisenalo hlobo lomsebenzisi, ngokufutshane, kum elo nqaku kunye nobungakanani bezinto ezinje ngamaqhosha kunye neebhokisi zebhokisi zezi ziboniswe kubumbano, ngentlonipho ngemibala, ayizizo ezona zikhethiweyo kodwa sinezihloko okwangoku.
Uluvo lwam lokuthobeka.
Ndiza kunamathela kwi-Mint, ekuphela kwendlela esezantsi kukuba ayinazo iinkqubo ezihlaziyiweyo, kungenjalo ndiyayithanda iCinnamon. Ngokombutho kunye nokusebenziseka ngokulula, andikhathali kuba ekugqibeleni ndishiya zonke iidesika kwisitayile se-mac: bar phezulu kwaye docky phantsi.
Umanyano kwilaptop yam yakudala andinakukwazi ukuyisebenzisa, ngoku ndinento entsha nenamandla ngakumbi ndiyinike ithuba kwaye inyani kukuba ayibi mbi njengoko abanye besitsho, bendiyisebenzisa ezimbalwa iinyanga kwaye ndiyithandile kakhulu kodwa ndikhetha iCinnamon.
I-mint ikhaphukhaphu kodwa njengoko besitsho emva kokuziqhelanisa ne-bash kunzima ukuya eminti
nangona zilungile zombini
UJuan Jose Cabral sitsho
Phendula uJuan José Cabral
UAlan Guzman sitsho
Ubuntu buzuze uzinzo olufanelekileyo kule minyaka idlulileyo.
Phendula uAlan Guzman
U-Eudes uJavier Contreras Rios sitsho
Masithembe ukuba abazenzi isidenge ngokuya kwi-plasma 5. Ukusuka kwi-KDE4 ukuya kwi-plasma 5 isuka kweyona mifanekiso ilungileyo yexesha lonke ukusebenzisa enye yezona zixhaphakileyo, kodwa ezona zingazinzanga.
Kungenxa yoko le nto ndingasiphakamisa isandla sam kwi-Mint KDE 🙂
Phendula u-Eudes Javier Contreras Rios
Isinaphi nguAmadeus Pedro sitsho
Phendula u-Mustard Amadeus Pedro
UGabriel Belmont EG sitsho
Phendula uGabriel Belmont EG
UGadi Creole sitsho
Hahahaha iimpendulo zabalandeli ezicocekileyo kunjalo.
Phendula kuGadi Criollo
I-Mint yi-Ubuntu eguqulweyo
Ubuntu yiDebian eguqulweyo. 😉
Kwisikolo esincinci apho ndisebenza khona, ngoomatshini abadala, ababeneXp, ndizamile iLinux Lite, ekucingelwa ukuba isebenzisa izixhobo ezimbalwa, emva kokuzama abanye, iLinux Mint 17.3, kuba asinayo i-intanethi kubo, yayiyeyona nto ilungileyo Oomatshini abancinci, kunye ne-1 gig yegusha. Ndiyithandile kwaye ndiyasebenza. Amava am othobekileyo, i-10 cpu, ene-15 crt monitors.
Ndivela ku-Ubuntu, ndiyayithanda ngakumbi kuyilo kunye nokusebenza. Kodwa kufuneka iqatshelwe ukuba iLinuxMint inokuba lula namhlanje kumsebenzisi omtsha kwaye, ewe, igcina umsebenzi omninzi emva kokufaka inkqubo kuba iphakheji yesoftware emiselweyo igqibelele; kodwa inento engandiqinisekisiyo kwaphela, kuyilo lobugcisa (olusebenzayo lukhulu kakhulu, lumka), kwiinkcukacha ezincinci andinakukuphepha ukuthelekisa noBuntu (ulawulo oluphezulu lweelwimi, umzekelo) kwaye kwiLinuxMint ilahlekile kwimbono yam. Ndiyayithanda iLinuxMint kwaye isebenza kakuhle, kufuneka ndiyamkele loo nto, kodwa isalahlekile into.
UCesare Waterlord sitsho
I-Linux Mint Debian ngaphandle kwamathandabuzo. Kunye ne KDE desktop ngokukhethekayo
Phendula uCesar Waterlord
Ndiyifakile iMint amatyeli aliqela kwaye kuye kwafuneka ndibuyele ku-Ubuntu. Yonke into isebenza ngcono ku-Ubuntu. Zininzi izinto ezisekwe kubuntu ezitshintsha kuphela ukujonga kwidesktop. Ngaphandle kokushiya Ubuntu ungenza okufanayo ngaphandle komzamo omkhulu. Ngokufaka imenyu yeklasikhi unokufikelela kwizicelo njenge-Windows okanye iMint. Ukufaka i-Docky okanye i-Cairo-dock une-dock efana ne-OS X. Ungayihlaziya i-Intel iigrafiki zokuqhuba, uzikhuphele kuzo https://01.org/linuxgraphics/downloads. Zininzi izicelo ezenzelwe Ubuntu kuphela, nangona inokufakwa kolunye unikezelo, ayikhawulezi. Kodwa Ubuntu buqinisekisiwe liqela leengcali elizinikele ekugcineni nokuliphucula. Ukuzinikezela ngobuchule akufani nokuzonwabisa.
Ndingathanda ukongeza into endiyibona ibalulekile. Ukusasazeka kunika iintlobo ezahlukeneyo; kodwa ayincedi mntu. Ukuba Ubuntu unayo into oyifunayo, kungcono ukuba unamathele kuyo kunokutshintshela kwi-Mint kuba uthanda umbala wedesktop ngakumbi. Isizathu kukuba isiqinisekiso esona sigqibeleleyo sokuba Ubuntu akafi kwaye aphucule kukuba ikhula kwinani labasebenzisi. Namhlanje iithelevishini kunye neenkqubo zokusebenza zixhomekeke kubaphulaphuli. Obu Ubuntu banezigidi zabasebenzisi eziluncedo kuthi sonke.
UJose Luis López de Ciordia sitsho
Inyani yile yokuba ikakhulu ngumbandela wokuzikhethela; kodwa ayisiyiyo loo nto kuphela. Ukuya kwinto enobugcisa kunye nekhonkrithi, andiyithandi imigaqo-nkqubo yeMint kuhlaziyo. Ngomhlaziyi we-Mint ushiya ngaphandle kokufaka uhlaziyo oluninzi lokhuseleko olunokubaluleka kukhuseleko lwenkqubo, abayiphephayo ngenxa yokuba "ungazicingeli gwenxa okanye uyaphule inkqubo". Ngamanye amagama, inkqubo enesiseko, nangona iyafana neyoBuntu, ifuna ukuba isiseko siguquke ngendlela eyahlukileyo ... andiqinisekanga. Kwaye ndafumanisa ukuba ii-PPAs ezithile azihambi kakuhle kwi-Mint. Ndinekhompyuter ethile apho kungenakwenzeka ukuba i-Libreoffice PPA isebenze. Ukungazibali iingxaki endiye ndadibana nazo ukuphuma kubusika (andikaphumeleli).
Phendula kuJose Luis López de Ciordia
Ndiyavuma xa kufikwa kuhlaziyo. Ngaphezu koko, kwiikhompyuter ezine-Ubuntu (okanye enye incasa, kuxhomekeke kumandla) endiwalawulayo kusapho nakwizihlobo, ndihlala ndimisela uhlaziyo oluzenzekelayo. Ndiyenza ngenxa yezizathu ezibini ezisisiseko:
1º Kuba abanye (abantwana nabantu abanolwazi oluncinci okanye abanalo kwaphela) ngabasebenzisi abaqhelekileyo ngaphandle kwemvume yolawulo. Andikwazi ukugcina umkhondo weekhompyuter zabo mihla le, kungangcono ukuba uhlaziyo lokhuselo lusetyenziswa ngokuzenzekelayo
2º Kungenxa yokuba ndiqinisekile ukuba uninzi lwabo bangabalawuli abayi kuyihlaziya le nkqubo nokuba, ubuncinci, ukuba uhlaziyo lokhuselo lusetyenziswe ngokuzenzekelayo.
Andiqinisekanga ngalo mgaqo-nkqubo wohlaziyo lweLinuxMint, nokuba ayinakwenziwa ngokuzenzekelayo, umhlaziyi weMint ubakhangela kuphela, kodwa angazifaki.
Ngapha koko, ndicinga ukuba Ubuntu bulungile kule meko.
Bendithandabuza, kodwa emva kwento oyithethileyo undiqinisekisile. Ndiyathanda ukuba iqela lam lingaphoswa luhlaziyo. Enkosi ngezimvo.
Italiesin LP sitsho
Ndisebenzisa Ubuntu ngaphandle kwamathandabuzo, kodwa ndicinga ukuba ngumcimbi wokungcamla kunye nomkhwa (ewe, bendibuthiyile ubunye ekuqaleni kwaye ngoku andinakuphila ngaphandle kwako). Ngokubanzima kokufumana usetyenziso, uzame i-ClassicMenu indicator (isibonisi semenyu) esibuyisela imenyu ye-gnome2 kwitreyi yesalathiso, kwezi zicelo ungazikhumbuliyo izinto ezibizwa ngazo okanye ongazikhumbuliyo ukufaka ...
Phendula iTaliesin LP
Ubuntu bomlingane, kuphela nge-bar ngasentla ndinayo nakwi-athomu kwaye ihamba kakuhle kakhulu.
UJuan LG sitsho
Okwangoku kwilaptop yam ndifakele Ubuntu ngeGNOME, iyandisebenzela kwaye iyenza isebenze kwaye ikhawuleze ikhompyuter yam iprosesa eyi-2-core, ekuphela kwento engandithembisiyo yinkqubo yokwazisa, yonke enye into ibalaseleyo, Khange ndizame Ubuntu nobunye ixesha elide andazi ukuba iqhubeke njani kwaye iLinux Mint khange indikholise ngaphaya kweentsuku ezimbalwa zovavanyo.
Phendula kuJuan LG
IMint okanye Ubuntu luxhomekeke kwikhompyuter nakumsebenzisi. Into esebenzela omnye umntu ayinakusebenza kuye. Kwelinye icala, kuyabetha ukuba iLinux Mint yeyona nto ikhutshelweyo kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo, kwaye Ubuntu buyehlisiwe phakathi kwe-3 kunye ne-4 indawo, naphantsi kwe-OpenSUSE (distrowatch)
ukuza kuthi ga ngoku ndihlala no-Ubuntu - Unty + compiz kwaye ndonwabile! I (Ndiyacacisa, ndikwi-arch) kodwa ndandingumsebenzisi wobuntu kwaye ndingumsebenzisi owonwabileyo 😉
Kudala ndisebenzisa Ubuntu iminyaka embalwa, kodwa okoko ndatshintsha iikhompyuter andiyekanga ukuba neengxaki kwabanye abaqhubi. Ngokukodwa nge-wifi. Kwiveki ephelileyo ndifake i-Debian, Ubuntu, Elementary OS, kunye neMint. Ubuntu kuphela obundinika iingxaki zomqhubi. Olunye uvavanyo luthathu kodwa iDebian yayiyeyona inzima xa ufaka usetyenziso oluninzi kwaye i-Elementary OS yayibonakala intle kakhulu kodwa ingazinzanga kwaye ineempazamo ezininzi. Ukufumanisa kwam yayinguMint. Yeyokugqibela endiyifakileyo kwaye okwangoku ndonwabile. Inyani yile yokuba kulungelelwaniso, ukusebenza kunye noyilo alunamona kwabo bangaphambili. Okwangoku, ngaphandle kwamathandabuzo, ndiza kunamathela kwiMint. Ndifakele inguqulelo 17.3 Cinnamont 64-bit
Inoveli kaJavi sitsho
NDIYAVUMELANA KAKHULU Ndingumsebenzisi omtsha kodwa ngaphezulu konyaka kwi-GNU / Linux ndizamile zonke iincasa ze-Ubuntu kwaye ingxaki yam enkulu kukudibana nabaqhubi, ngakumbi iWi-Fi, eneLinux Mint andinangxaki. Okwangoku ndisebenzisa i-LinuxMint 18.3 Sylvia Xfce kwaye igqibelele, izinzile kwaye ilula. Okokugqibela, ngokubhekisele kwisoftware eziswa yingqondo, igqibe ngakumbi kuneBuntu.
I-PS: ukuba kukho umsebenzisi ofuna ukuzama ukusasazwa kwe-GNU / Linux ukuqala kweli hlabathi, ndincoma ukusebenzisa iLinux Mint (iLinux Mint Xfce yeekhompyuter ezinesixhobo esisezantsi).
Ndisebenzise Ubuntu ukusuka kwi-9.04 ukuya kwi-14.04. Kude kube nge-12.04 Ubuntu yayikukugqibelela ngokupheleleyo, okungasasazeki. Kwiminyaka emi-6 khange kufuneke ndiphinde ndifake, kodwa kwinyanga ephelileyo, kuye kwafuneka "ndiphinde ndifake" (ngenene ndicime kunye nefomathi yokwahlula ukufakela okucocekileyo kwaye ndishiye ngaphandle kwamathandabuzo) kodwa ndayijongela phantsi, inokwenzeka. Ihlale iiveki ze-3 kwaye ukoyikeka kwe-kernel bekungenakwenzeka ukusombulula, ndichithe iintsuku ezi-2 ndihamba ngeeblogi, i-wiki kunye neeforamu. Sele zikhona izinto malunga ne-14.04 ebendingazithandi kodwa bendihlala ndisebenza kakuhle no-Ubuntu, ndiyidlale kancinci. Ngamafutshane, ndiye ndafumanisa iLinux Mint 17.2 Mate ukuza kuthi ga ngoku, andizisoli ngotshintsho, nangona bekusele iiveki ezimbalwa kwaye, ngokusekwe kwi-Ubuntu, iluncedo kakhulu kum. Imeko yendalo yedesktop inenzuzo yokukwazi ukwenza ngokwezifiso yonke into njengakwiGnome 2 kwaye ayinangxaki nezalathi, into eyenziweyo kwiGnome 3, nangona yonke into inokusonjululwa, kufuneka icaciswe.
UJavier Hernandez - Crnl-Misero sitsho
Ubuntu Mate 16.04 !!!!! krwada
Phendula kuJavier Hernandez-Crnl-Misero
UCarlos Perez sitsho
Ndisandula ukufaka ubuntu 16.4 kwikhompyuter yam yedesktop, ndiyayivavanya kodwa ngelishwa kwenzeka into phakathi kwale nguqulo intsha ye-ubuntu kunye ne-amd, ngelishwa iprosesa yam kunye nemizobo i-amd, ndibona ukusebenza ngokukuko kweminti esele ndiyifakile kwilaptop, yintoni inkangeleko eyahlukileyo, nangona iunity ibonakala inomdla, inyani kukuba ukuhamba kuyo akubonakali kumnandi kum, kufana nokusebenzisa iiwindows 8 ezaziyicarma kum. Ndinoqwalaselo lweebhari ezimbini zetyeleba, 2 phezulu kwiinkqubo ezingagqibekanga kunye nesezantsi sezaziso kunye neefestile ezisebenzayo, yindlela endenze ngayo ngokobuqu kwaye ndiyayithanda ngcono, kufana nokuba nocwangco olungakumbi.
Uluvo lwam kukuba usebenzisa eyona nto uyithandayo, kodwa ndiyaqhubeka nesinamon yeminti, zizinto nje abazithandayo. Ngokubhekisele kwiinkqubo kunye nohlaziyo, ndicinga ukuba ziyafana, nokuba zizenzekelayo okanye akunjalo.
Phendula u-carlos perez
Ibhotwe laseBombay sitsho
oku bekukho okwexeshana, kodwa ndizamile Ubuntu MATE 16.04 LTS kwaye ijongeka intle!
Phendula kwiBhotwe laseBombay
Bendihlala ndisebenzisa Ubuntu, ngakumbi iXubuntu, iLubuntu kunye ne-LXLE, kwaye kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo nditshintshele kwiLinux Mint kwaye andizisoli ngotshintsho kwaphela, ndicinga ukuba kunzima kakhulu ukuba ngenye imini ndiza kunika uBuntu ithuba kwakhona.
UJhonny Melavo sitsho
hahahahaha, uthanda njani ukuza ubethwe, eh Alejandro?
Phendula Jhonny Melavo
UJaime Ruiz sitsho
Ndizamile iLinux Mint ixesha elide, kwidesktop, nakwiilaptops ezimbalwa kwaye zisebenza kakuhle kum, iOfisi yeLibre ayinayo intsebenzo endiyilindeleyo, kodwa ngomnye umba lowo ... ukuzama i-UBUNTU.
Phendula kuJaime Ruiz
Mint ngodilika mhlaba kwabo bavela kwiWindows. Ubuntu ndiyifakile kwaye ndiyisuse ngokufanayo: imbi, iyacotha, andiyithandi kwaphela.
Ngoku ndinayo iMint phantse yonke into kwaye Windows 10 kwimidlalo.
UPierre Aribaut sitsho
I-Linux Mint 18.2 (ngoku eyi-18.3) kunye neCinnamon iinyanga ezi-6, xa uvela Windows 7 okanye ngaphambili, ilungile, kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye izinzile 🙂
Phendula kuPierre Aribaut
Ndiza kunamathela kwi-gmac esekwe kubuntu ... ndinelaptop eneminyaka esi-7 ubudala kwaye isebenza kakuhle ... kwaye nangona i-gmac ingasasebenzi kodwa iyaqhubeka nokufumana uhlaziyo lobuntu kwaye ndinayo nge-16.04
MINT BONKE UBOMI, UBUNTU kwidell yam ye-XPS 501LX yengozi, isebenza njenge-ortho kwaye uthethelele igama. Ngamaxesha onke iingxaki, ukuba kulula kakhulu ukufaka iiphakeji, kuphela kwento endiyibonayo intle kunezinye i-distro.
Ekuphela kwento yokuthetha inyani kwaye andinguye fan omkhulu we-linux
UNelson Pais sitsho
Iminyaka emi-5 ndizifakile zombini kwiidiski ezahlukeneyo kwaye ekugqibeleni ndinayo iMint njengeyona ndiyithandayo, endiyisebenzisa ngokungagqibekanga. Njengoko ndingabuthandi ubunye, ndizamile iMint kwaye yaba yeyona ndiyithandayo-
Phendula kuNelson Pais
Ubuntu bam okoko i-linux mint indikhumbuza ngeewindows 2000
Into endicaphukisayo nge-Mint kukuba xa kukho ukusikwa kwamandla okanye kujinga ngesizathu esithile kwaye kufuneka unqamle kakhulu, i-boot grub iya ngokupheleleyo kwaye kunzima kakhulu ukuphuma kwi-initrams, nge-xubuntu ayinayo Emva koko, Kakhulu kum, ndikhetha i-xubuntu xfce + cairo dock + arc theme + icon elementary ..
Win10 + VisualStudio + Corel2018 + VisualNEO, ngokubhekisele
I-Linux Mint yeyona ilungileyo kuyo yonke into!
Apho kukho uluhlaza oluhle oluneminti, makususwe i-ocher embi yentlango ...
Mint 18 kunye nesinamon.
wilo santos sitsho
Ecaleni kokukhipha iiwindows 7 zepremiyamu yasekhaya kwi-mini yam ye-acer laptop kuba iyacotha, ndicinga ukuba ndiza kukhetha i-MINT kuba ubuntu inguqulelo 18 ibisacotha.
Phendula kwi-wilo santos
Ndingacinga ubuntu nesinamon, kodwa ndayeka kwakudala ndibuyele e-debian.
Mva nje ndivavanya i-Deepin kwaye ndiyithanda kakhulu.
Ndingutitshala kwaye sifakele Ubuntu kwiikhompyuter zabafundi bomjikelo wokuqala we-ESO. Intlungu esile.
Sizamile iLinux Mint kwaye yonke into itshintshile. Kungcono noko. Andazi ukuba yeyiphi eya kuba ngcono, kodwa, kubaqalayo beLinux Mint ngaphandle kwamathandabuzo ngokusebenziseka lula. NgeLibreOffice, iChromium kunye neVLC unokwenza phantse yonke into oqhele ukuyenza ngekhompyuter yakho.
UJose Maria Amador sitsho
Molo, ndiyazithanda ii-OS ezimbini endizenzileyo? , Kulula ndineemoto ezimbini ezinzima kwinqaba, kwenye ndinobuntu kwaye kwenye ndineLinux, ndisusile isiciko kwinqaba ukufikelela ndinediski enye eqhagamshelwe ebhodini, xa ndifuna ukuqala enye i-OS ndiyicime enye kwaye ndiyidibanise nenye.
Malunga ne-20 okanye i-25 kwiminyaka eyadlulayo ndafaka iisistim ezimbini kwidiski enye, iWuindows kunye noBuntu, ndenza izahlulelo ezimbini kwaye zazilungile kodwa xa kwakufuneka ndihlaziye kwafuneka uqaphele xa uqala kwakhona.
Kwakungemva koko ndaye ndagqiba kwelokuba ndi-avandonar i-Wuindows ndibeke ii-Disks ezimbini, enye ene-Ubuntu enye ine-Linux.
Kwaye ukuba kunzima ukutsho ukuba yeyiphi engcono, yiyo loo nto ndinazo zombini.
Phendula kuJose Maria Amador
U-Ivan Sanchez -Argentina - sitsho
Ndikhetha ngokukodwa iMint, nangona ndicinga ukuba maninzi amanqaku okuhlalutya, ndiye ndaphawula ukuba kweyona Mint ibalulekileyo ithatha imbeko. Xa Ubuntu ixhonyiwe iye icothe kwaye ke ilahleke kozinzo. Mint ikwazile ukuphuhlisa ukubhobhoza okukhulu okwenza ukuba kube lula ukusebenza.
Ukushiya bucala ukuthandana kokuchitha ixesha elininzi kunye no-Ubuntu kunye nokunxibelelana kwayo nobuhle, ukucotha kwayo akwenzi ukuba kube mnandi kwaye xa usebenza okanye ukonwabela ikhompyuter le ngongoma imbi kakhulu. Ndicinga ukuba inkqubo enendawo esisiseko kunye nobunzima iphumelele ngakumbi kunemizobo engcono kunye neziphumo ezidityaniswe nengozi.
Phendula Iván Sanchez - Argentina -
Ndiyabuthanda ubuntu obungcono kodwa ukuba sidibanisa i-elementaryOS ndiyaqhubeka nokuqala
Obed medina sitsho
Ngokuzithoba kakhulu kufuneka ndinike inkxaso kwi-LINUX MINT 17.3 MATE, kwii-linux distros ezininzi endizizamile, yeyona ilula, ikhawulezayo, inomdla kwaye inokuthenjwa. Ndisebenza nee-laptops ezincinci, ii-CPU ezindala kunye nazo zonke izinto ezikunye; eneneni ndine-DIGITECA ebalekayo kwaye iyanda kwaye inamanzi kakhulu nge-linkys router kunye ne-lampp 5.6 kwiikhompyuter ezingama-21 kwiziko le-CBIT ...
Ukuhlonipha ezinye izimvo namava ... Ndiyayixhasa kwaye ndiyayinyusa iMINT
Phendula uObed Medina
Kude neLinux Mint kukhetho lwam. Ndihlala ndisebenzisa i-LM kwi-netbook kwaye ndiyayithanda. Ndithenge idesktop ene-I9, 16 gb yenkunzi yegusha, eyomeleleyo engama-500 gb kunye ne-2tb eqhelekileyo. Ndithe kwithuba elidlulileyo, ndikuthumela Ubuntu 18.04 kwaye ndiza kuqala ukuyisebenzisa. Ihlala indibiza umba weBluetooth eyayisikiweyo, i-wifi eyayisikiwe okanye engasebenziyo ngesantya sokuba kufuneka ihambe kunye neengxaki ezininzi. Njengazo zonke iingxaki ezivelayo, ndamnika amathuba. Ngenye imini, babhengeza i-LTS 20.04 kwaye ndathi, ndiza kuyivuselela ukuze ndibone ukuba ikhona into ephuculayo. Iyeza lalibi kakhulu kunesi sifo kwaye ndandidikiwe. Ndibeka i-mint kwidesktop kwaye yonke into ilungile kwaye inezinto ezininzi eziluncedo. Ndiyayithanda iMint. !!!! Imibuliso kubo bonke.
Ubuntu buyacotha. Nanini na xa ndiyifaka, yayinayo loo nto. Kubonakala ngathi ayikho phakathi kwezinto eziphambili ze-Canonical, kodwa ndifuna nje ukuba inkqubo ikhanyise ukwaba izixhobo zam zekhompyuter kwiinkqubo kunye nemidlalo. Emva koko umbono ukhethiwe (kukho iMint Mate, iMint xfce, iMint cinnamont, njl njl. Akuqinisekisi ukuyifaka njengenxalenye yovavanyo. Ndicinga ukuba Ubuntu ilungile ukuba uluhlobo lomntu ongakhathaliyo ngokuchitha izixhobo okanye ekufuneka ebasindisile. Okwangoku, zisekhona izizathu zokuba ukhethe iLinux Mint.
Ndincamathele kwiLinux Mint, indilingana ngokugqibeleleyo nePC endinayo kwaye izinzile ngakumbi kuneBuntu. Ndixhalabile kuphela ngumba wezokhuseleko kuba besithi iMint ayiwugxininisi lo mbandela kodwa sele ingumbandela wokukhathalelwa komntu ngamnye.
Ugqibela ngokuya eMint kwaye andizisoli nangaliphi na ixesha ukuba ndiyenzile.
Ulwazi lwasimahla sitsho
Une uxwebhu lokuthulula isifaki kunye nomlingisi weLinux Mint: https://infolib.re
Inqaku elinomdla, merci!
Inqaku le-intéressant, merci
jorge luis sitsho
Kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo ndafaka ubuntu 20 kwi-macbook 2008 4.1 ene-2gb yenkunzi yegusha, i-2,4ghz kunye ne-240gb SSD, kubonakala ngathi intle kwaye konke kodwa andikaze ndisebenzise i-linux distro kwaye ndifuna ukufaka i-linux… Ndizamile i-mint yeLinux ngenxa yokuthanda ukwazi kwaye ndabona ngovuyo olukhulu, (andazi ukuba naku-Ubuntu) ukuba ndinethuba lezithandwa zam zeHOT CORNERS endizisebenzisa kakhulu kwi-OSX, ngenxa yoku kunye nokulula Ngokubanzi, ndiza kuhlala neMint okwethutyana, Kwinto endiyifunda kancinane malunga nelizwe le-linux, ngendlela eyayiyintloko ebendinonxibelelwano lwe-Wi-Fi kodwa bendingenayo idatha ...... de Ndimkhuphile umqhubi oqhelekileyo, ndacoca iirekhodi ndaza ndaphinda ndafaka efanelekileyo kwindawo yam yokusasaza
YAM MINT !!!!
Héctor T. Chávez Valencia sitsho